अस्पताल नगएरै गर्भमा छोरी छ कि छोरा सजिलै पत्ता लगाउने तरिका हेर्नुहोस् – Krazy NepaL
February 7, 2021 14079
महिलाको खानपिनको शैलीले पनि गर्भमा छोरा वा छोरी छ भन्ने कुरा बताइरहेको हुन्छ। यदि गर्भवतीले नुनिलो खानेकुरा बढी मन पराउँछिन् भने उनको गर्भमा छोरा रहेको हुन्छ । त्यस्तै, यदि उनले गुलियो बढी मन पराउँछिन् भने उनको गर्भमा छोरी रहेको हुन्छ। यदि गर्भवती महिलाको धड्कन सामान्य हुन्छ भने उनको गर्भमा छोरा रहेको हुन्छर यदि गर्भवतीको धड्कन बढ्छ भने उनको गर्भमा छोरी रहेको हुन्छ । कान्ति पथ बाट ।
Prevपेटमा बोसो लाग्न थाल्यो ? त्यसो भए यी खानेकुरा खानुस्, पेटमा बोसो पगाल्नुस् !
Nextमाघ २६ गते, सोमवार निकै राम्रो छ यी राशिको भाग्य, हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल
संसद विघटन बदर, पुनर्स्थापनकाे पक्षमा सर्वाेच्चकाे फैसला
आज ०५ चैत्र बिहिवार २०७७ निकै राम्रो छ हेर्नुहोस् राशिफल